အကောင်းဆုံး Shanks Adapter ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Gimarpol
Shank adapter ဆိုတာဘာလဲ။
Shanks bar, သပိတ်ဘား, Shanks adapter
သိပ္ပံနှင့်စံချည်မျှင်သွားဒီဇိုင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းကိရိယာများ၏အခြေခံဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ချည်ဆက်သွယ်မှု၊ တိကျစွာချည်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သည်တစ်ခုတည်းသောချည်ဆက်သွယ်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံရန်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော (သို့) သေးငယ်သောကွာဟမှုနှင့်မတိကျသောချည်ဆက်သွယ်မှုသည်တူးဖော်စဉ်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်တုန်ခါမှု၊
2. တူးခံရဖို့ပစ္စည်းအရသိရသည်သင့်လျော်သောလည်ပတ်မြန်နှုန်းညှိပါ။ အကယ်၍ လည်ပတ်နှုန်းသည်အလွန်မြန်လျှင်အပူနိမ့်သောအရည်ပျော်မှတ်ပစ္စည်းသည်ပျော့ပြောင်းပြီးအလွန်နှေးသောမြန်နှုန်းဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းသည်ကပ်ပါလိမ့်မည်။
4. တူးစက်သည်မြန်နှုန်းမြင့် rotary feed ဖြစ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုကာကွယ်ရန်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
5. လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း၏ပြတ်သားသေချာစေရန်သတိထားပါ။ drill bit ကိုပုံမှန်ထက်မြက်ရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။
(၁) သက်ရောက်မှုတူးဖော်သည့်တူးဖော်ရာများ - ဝါယာကြိုးကြိုးသက်ရောက်မှုတူးဖော်ရေးတူးစင်များ၊
(2) Rotary တူးဖော်ရေးတူးစင်: ဒေါင်လိုက်ရိုးအမျိုးအစား - လက်ကိုင် feed ကိုအမျိုးအစား, လိမ် differential ကို feed ကိုအမျိုးအစား, ဟိုက်ဒရောလစ် feed ကိုအမျိုးအစားတူးစင်; turntable အမျိုးအစား - သံမဏိကြိုးပေါင်း decompression အမျိုးအစား, ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါပေါင်း decompression အမျိုးအစားတူးစင်; မိုဘိုင်း Rotator - အပြည့်အဝဟိုက်ဒရောလစ်ပါဝါခေါင်းကိုအမျိုးအစား, စက်မှုပါဝါခေါင်းကိုအမျိုးအစားတူးစင်။
(၄) ပေါင်းစပ်တူးဖော်သည့်စက် - တုန်ခါမှု၊ သက်ရောက်မှု၊ လည်ပတ်မှု၊ ငြိမ်သောဖိအားစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့်တူးဖော်သည့်နေရာသည်မတူညီသောပေါင်းစပ်မှုများတွင်။
အများအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းသည်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်ရက် ၂၀ လိုအပ်သည်။
T / T၊ L / C၊ West Union, One Touch, Money Gram, Paypal ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။
Q3: Shipments နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
အခြားပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ အမြန်၊ လေ၊ ပင်လယ်၊ နှင့်ရထားဖြင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ထံပေးပို့နိုင်သည်။
ကျနော်တို့တင်ပို့ခြင်းမပြုမီလူတိုင်းခလုတ်ကိုစစ်ဆေးနေ & စမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။
Q6: button ကိုအရောင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရန်ရွှေ၊ ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့်အပြာများရှိသည်။
ရှေ့သို့ Taper ချောင်းတွေ